Palandoken Ski Center dị njikere ịnabata ndị hụrụ n'anya | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyEastern Anatolia Region25 ErzurumPalandöken Ski Center dị njikere ịnabata ndị hụrụ ski
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 25 Erzurum, Eastern Anatolia Region, General, Isi akụkọ, Turkey, TELPHER 0
palandoken ebe ezumike adịla njikere ịnabata ndị hụrụ egwuregwu ski
Erzurum Palandöken Ski Center dị njikere ịnabata ndị na-ahụ maka sklo na ụlọ nkwari akụ 5 ya, ụlọ bungalow nke 9 na mgbatị sọọsọ yana egwu egwuregwu na otu ga-emepe n'oge ọhụrụ.
Natural Environmental Akụkụ Winter njem ije na okwu nke Turkey bụ isi na skai ebe ke akpa ntaifiọk na-enwe 3185 MA elu Palandöken Mountains, emi odude n'ebe ndịda nke ógbè nke Erzurum na gbatịrị n'ebe ọwụwa anyanwụ ọdịda anyanwụ-direction. Ugwu Palandöken kpuchie ebe dị ihe dị ka 70 km ogologo yana 30 km. Ugwu ahụ malitere site na 2000 m ruo 3176 m. Ugwu dragọn kasị ukwuu 3176 bụ mejupụtara ebe kachasị elu nke Ugwu Palandöken, obere obere dragọn 3095 m na-agbago na ndịda Erzurum etiti obodo na mpaghara ndịda nke H ofnısboğazı skai mpaghara
Ugwu Palandöken, nke na-enye ugwu ugwu, na-abụkarị aghaa ma e wezụga ndagwurugwu na-echekwa echekwa. Pekwụ na oke na-ekpuchi. N’ihi oke ugwu dị, ihe mmadụ mekọtara ọnụ pụtara ebe a na-agwakọta mkpọda ugwu na mkpọda na-apụta. Ka ọ na-aga elu, nnuku ahụ na-agbanwe site na nnukwu ụta ya na ọnụ ọnụ ya.
Ugwu Erzurum gbara ya gburugburu ma nwee ihu igwe oyi. Otu n’ime ihe ndị mere ka ogologo njem ikuku Erzurum mee bụ ka n’agha enweghị atụ. Erzurum nwere ihu igwe nke na-enye nkasi obi maka bioclimatic n'ihi oke elu ma nwee mmetuta na-eme ka arụ ọrụ dị elu. Oge a dị na njem nlegharị maka oge oyi na Palandöken bụ ụbọchị X XXXX / ma ”na-ekpuchi Disemba, Jenụwarị, Febụwarị, Machị na Eprel. Na ọnọdụ oge oyi, oke snow na mpaghara skai karịrị 150 m. Dị snow dị ezigbo mkpa maka ọrụ egwuregwu. N’ezie, mkpuchi snow kwesịrị ịda n’ụdị kristal kpuchiri, ọ bụghị ice-snow ma ọ bụ snow dị udu mmiri, iji wee mepụta ego maka njem nleta na-akpata. Ogologo snow dị na Palandöken dị oke elu, mana o nwere ntụ ntụ nke snow n'ihi usoro anụ ahụ ya.
Snow quality bụ kefriza nke onwunwe, regulates oyi njem center Palandöken uru ọnọdụ karịa ndị ọzọ na ẹdude oyi njem emmepe na Turkey. E wezụga njiri mara kristal, ọnụ ọgụgụ nke ụbọchị anwụ na-ahụ n'afọ a sokwa na uru ịgba egwu ski na njem egwuregwu Erzurum. N'otu oge ahụ, eziokwu ahụ na ogige egwuregwu dị ihe dị ka nkeji oge 20 site na ọdụ ụgbọ elu bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na-eme ka njem nlegharị n'oge oyi mara mma na Erzurum.
The mbụ njọ na mbara oru ngo Palandöken Ski Center maka oyi njem Turkey "Erzurum si Palandöken Winter Sports na Tourism Master Plan" ọmụmụ. N'ime ihe omumu a, e kpebiri na Palandöken Ugwu nwere njiri mara ebe egwuregwu egwuregwu mba oyi na ụwa ya na ọdịdị ya na ihu igwe siri ike. Ihe oru ngo a n’echeta na otutu ndi mmadu puku mmadu nke 32 nwere ike igba elu na mpaghara ato, enwere ike ịhazi asọmpi mba ụwa na ọbụlagodi olympics, na puku mmadụ 6 nwere ike were ya n'ọrụ.
Erzurum-Palandöken Winter Sports and Tourism Master Plan (1991) mere ka amata ebe atọ dịpụrụ adịpụ maka ịgba ọsọ na mpaghara. Ndị a niile dị na mgbago ugwu nke ugwu Palandöken. Ugbo a bu; Hınıs-Palandöken Strait Ọnọdụ, Gez Plateau na Konaklı Mpaghara. 25 na mpaghara ndị a na-ahụ maka atụmatụ nna ukwu. Mgbe anyị tinyere mpaghara Kandilli mepụtara n'etiti usoro egwuregwu World Inter-University nke oge oyi, anyị nwere ike ịkpụzị ebe nlegharị anya oge Erzurum na ngalaba isi 4. Hınıs - Palandöken Strait Ọnọdụ: Ọ dị na Erzurum Strait (nke a makwaara dị ka Hınıs Strait na Tekman Strait) nke dị na ndịda Erzurum na 5 km. Mpaghara a, nke a na-akpọkarị Palandöken Ski Resort, gụnyere Ejder Hill na gburugburu ya n’elu ugwu Palandöken. Palandöken Ski Center abụrụla otu n’ime ebe dị mkpa maka njem njem oyi nke ala anyị na akụrụngwu sọọsọ, ogologo ukwu na mbara, ụlọ ebe obibi na ụgbọ ala ebe enwere ike itinye ọzụzụ Alpine mfe.
A na-eme ihe egwuregwu n'egwuregwu oyi na eriri 2200-3176 mita na Palandöken Ski Center ma a na-eme ya na Namlıkar, Hınıs Strait, Konaklı, Ülkeroğlu na Yağmurcuk mpaghara si n'ebe ugwu gaa na ndịda. Palandöken bụ otu n'ime ụlọ ezumike egwuregwu kacha mma n'ụwa yana 5 km tere aka na etiti Erzurum. A na-eme egwuregwu skak dịkarịsịrị elekere 25 - 30 na ọdụ ụgbọ elu Erzurum.
Uwe mmiri na-agba ọsọ na Palandöken Ski Resort so na ndị kacha ogologo na steepest sọọsọ ụwa. Palandöken Ski Center nwere ngụkọta ọsọ ọsọ 27 nke ịgba ọsọ nke ihe isi ike dị iche iche, gụnyere usoro egwuregwu sịnịma dị iche iche, yana International Ski Federation (FIS) masịrị slopes skru maka ndị ọkachamara ịgba ọsọ. Ogologo ugwu kachasị ogologo bụ 12 km na ngụkọta ogologo nke slopes bụ 28 km Ihe dị iche n'etiti mbido na nkwụsị bụ mita 1100. Ekwuputala ụzọ ndị gbara agba nke Ejder na Kap askaya dị ka aha Olympic maka asọmpi Slalom na Great Slalom. A na-eme asọmpi Slalom na Great Slalom na mkpọda ndị a, yabụ ha so na mkpọda ndị a na-ahọrọkarị n'etiti ebe egwuregwu skai.
Enwere oche oche 5 (ikike 4500 mmadụ / elekere), 1 oche (ikike 300 mmadụ / elekere), nwa 2 nwa (ike 1800 mmadụ), 1 gondola lif (1500 mmadụ / elekere) na Ski Center. Palandöken na-ahazikwa asọmpi sọọsụ na snowboard na ememme snow n'ụdị dịgasị iche iche. Na mgbakwunye, enwere ebe njem njem anọ na ugwu ahụ, otu kpakpando 5 na 3 4, yana ebe egwuregwu ski, ụlọ ọrụ ụbọchị na ụlọ nri. Ikike dị n’elu akwa ski dị ihe dị ka 2000.
Turkey praịm mkpa na bụ otu n'ime ndị bụ isi oyi njem emmepe Palandöken Mountains dị ka a n'ihi nke ọmụmụ rụrụ site ọha na eze na nkịtị nwe, ski na mmegharị oyi njem dị ka mba ebe a na-ji na na direction. N’aka nke ọzọ, a na-ahụ na ndị njem nleta n’ime ụlọ karịrị nnọọ ọnụ ọgụgụ ndị bịara njem mba ọzọ. Profaịlụ nke onye ahịa nke ọtụtụ ndị mba ọzọ na-eme njem nleta na Palandöken bụ ndị njem si Ukraine, Russia, Iran, Azerbaijan, Georgia na Middle East. 25 bụ owuwu nke sọdọgị n'ezie n'oge a na Palandöken. Ejiri Egwuregwu Egwuregwu -wa Mahadum Interwa.
Konakli: ndịda ọdịda anyanwụ nke Erzurum na 18 km gaa etiti obodo. N'agbata obodo Konaklı (2200 m) na ugwu Kırkulak (3084 m), etiti skai ahụ na-adabara adaba na asọmpi Alpine na asọmpi egwuregwu sọọsọ. 25 dị ugbu a. N'ime oke egwuregwu World Inter-University Winter, enwere ọsọ ọsọ 460 na-ekpuchi mkpokọta 11 hectare dị njikere maka ọzụzụ Alpine na agbụrụ slalom. Ọ bụ ezie na ala ahụ nwere mpaghara skị dị iche iche, ọ bụ ihe dị mkpa dị na Konaklı na ọ na-enye ohere ịtọ njikọ n'etiti mpaghara ndị a.
Gez Plateau: Ebe egwuregwu oge oyi nke Gez Plateau dị na 2200-2770 m nso na 7 km n'akụkụ ọwụwa anyanwụ Erzurum. Hectare 54 nwere agba atọ dị obosara nke na-esite na elu ruo na ndịda ọwụwa anyanwụ. Mpaghara mmịfe ahụ dị n'etiti 2150 m na 2750 m. Ọ dị mma maka egwuregwu ski na egwuregwu free. Agbanyeghị, enwebeghị ọmụmụ ọ bụla emere na Gez Plateau na usoro egwuregwu oyi.
Kandilli: Kandilli Ski Resort, 25. Mepụtara ije ozi nke biathlon na asọmpi egwuregwu sọọsọ na-agabiga agbarite n’egwuregwu World Inter-University. A na-ewu ebe Kandilli Ski Resort na ala 160 ha na ebe ndagide dị na elu 1713-1767 m. 36 kilomita site na etiti obodo. Pụọ. Kandilli nwere ebe egwuregwu sọọsọ, sịnịma sọọsọ nwere ọkwa nhịahụ dị iche iche, ebe egwuregwu sọọsọ yana mkpọda ugwu ugwu.
Ụlọ nkwari akụ na 30 Room na Palandoken Ski Center
Erzurum Palandöken Logistics Center kwadoro
Palandöken Logistics Center Investment Number 105 Million TL
Na Palandöken Logistics Center in
Palandöken na Konaklı Tinye Oge na Ozi Ọma